Maalinta Jacaylka ‘Valentine's Day’ - Land Of Punt
Maalinta Jacaylka ‘Valentine's Day’
Maalmaha ku began 13-15 Feebrayo siiba 14 Feebraayo ee loo dabaal dego xuska jacaylka “Valentine’s Day” waa taarikh cidkale leedahay. Boqortoyadii guunka ahayd ee Imbrodooriyada Roomanka ayaa maalinta taarikhda ku began udabaal dagijiray xaflada looyaqaan “The Feast of Lupercalia”. Malinta jacaylka “Valentine’s Day” waxay inagatimid oo dunida kusoo daray barashadeeda maalinta iyo inlaxuso ninka-cad. Reer Yurub waxay kasoo amaahden maalinta jacaylka awoowayashod oo iyagu maalinta jacaylka uyaqaanay maalinta Lupercalia caana ka ahayd degaanka ay kunoolayen wakhti jaahiligii “Pre-roman” intaan boqortooyada roomanku hanaqaadin oo dunida isku balaadhin.
Wakhti jaahiliga hore waxaa loo dabaal degijiray ilaaha Luubarkos ‘Lupercus’ oo aay aminsanayeen inuu yahay ilaaha barakada qoyska iyo lamaanaha, ilaaha barakeeya ubadka iyo isutaga lamanaha. Debaal dega loo samaynayo ilaaha Lupercus; romanka waxaa caado u ahayd inay Ri iyo Ey sadaqaystaan si jawi cusub nololshoodu ugasho. Dhiiga Riyaha iyo Eyda ayey ismarinjireen hargahana way huwanjireen, markaas ayaa Luubarkos ‘Lupercus’ loo yeedhijiray. Waxaa dhaqan u ahayd in hablahana dhinac laysugu didiyo ragana dhinac lasoo tubo. Ileyn Riyuhu dib malahee, raga ayaa Eyga ahaa waxayna ukala dheeraynjireen dibka Eyga lagajaray, markaasay iyagoo dhiigi dusha kuleh oo qaaqawan furjuq kula odhanjiray hablaha. Ninka dibka latiigsada inan/hablaha oo laftarkoodu didaya markay arkaan rag qaaqawan oo qaanqadha oo sooyaacaya ayaa maalinta iyo habeenkaaba qoys barakaysan ahaa.
Bulshada kale ee aan kaqaybgalikarin xaflada Luubarkos ‘Lepercus’ sacabka ayey marba labada is haleela ugaraacijireen oo odhajireen manta uunbad heshay ruuxi nafta kula wadaagilahaa. Intanbadan raga lacagta leh ayey guushu raacijirtay siday iminka tahayba oo laalush iyo musmaasuq ayey safka hore ku cidhiisanjireen. Dhalinyarada xayraanka ah ee bilaa lacagta ah ayaa booska laga iibsanjiray, halka kuwadiida inay laalush ka qaatan inay booskooda ka tanaasulan oo calaf ka dhexraadinaya maalinta Luubarkos “Lepercus” hadaydoonba iska ladan ayaa laga dhargin jiray khamri qaali ah si aanu hadhow marka isbacsigu yimaado aanu tamar ulahaan waana xifrada ugu danbaysa ee odayaashu raga dhalinyarada iska reebijireen. Jacayl iyo galmada maalinta Luubarkos waxay kaloo ka aaminsanayen in dunuubta ladhaafo naftooduna noqonay ta sabiga ookale.
Malinta Luubarkos “Lupercalia” inloo badalo maalinta jacaylka “Valentine’s Day” hindisaheeda waxaa laha kiniisda katoliga. Kiniisada katoliga waxaa laga dilay wadaad wacjibadnaa oo la’odhanjiray ‘Valentines’ waxaana dilay Boqorkii roomanku ‘Claudius II’. Kiniisada katoliga wakhtigaa wadaadka ladilay awood badan maylahayn lakinse wakhti danbe oo dacwadii kiristanku gaadhay meelobadan yurubta ayey hindiseen in maalmaha khuraafad yurub laga caabudo dusha kaga qariyaan maalmo muhiim u ah diinta kiristanka sida dhalashda nabi Ciise oo markaa. Xikmada kujirta in maalmaha khuraafadka lagu qariyo maalmo kale waxay istuseen in kolayba hadii aanay daynay khuraafad ay xusayaan aynu ugu badalo inay xusayaan dhalashadii nabi Ciise. Sababtaas ayaa keentay 25ka December oo ah maalinta ugu dheer yurub ee qoraxdu ka maqantahay qaarada Yurub ayey xerta khuraafadku sigaara uxusaan qoraxda iyagoo ay markaa in qoraxdu ducadooda kusoo noqonay. Kiniisada ayaa maalinta qabowgu jiro ee madow ka dhigtay maalinta nabi Ciise dhashay.
Waxaa kaloo caado u ahayd kiniisada katoliga in wadaada ladilo iyagoo dacwad diiniya kujira in loo aqoonsado inay gaadhen meeqamka awliyanimo. Wadaadka boqorku dilay “Valentine” oo ladilay 05 Feebrayo ayaa noqday wadaadka ugu dhow tarikh ahaan maalmaha khuraafadka ee Lupercalia oo iyada xuskeedu dhaco 14 Feebrayo in loo nisbeeyo wadaadka Valentine, sidaas ayaa maalinta uu dhintay wadaadku dusha looga saaray maalinta Lupercus oo noqotay maalinta “Saint Valentine’s Day”. Waxay ku tusay inaan Jacaylkii roomankana laga tegin lakinse laraaciyey nin awliyo ah oo dusha kalasocotaa dhaqdhaaqa. Runtu waxay tahay in been iyo khuraafad laysku madadaalinayo oo dab iyo danbas layska iibinayo. Kiniisada Katoligu waxay xusayaan dilkii xaqdarada ahaa ee Valentine, qolyaha kasoo jeeda roomankii hore ee aminsan khuraafadka waxay xusayaan Luubarkos ‘Lupercus’/Ibliis. Adigu maxaad xusay?
Shaydaan caabudki weyna ee Shakespeare ayaa cidla ka qooqay ‘In Love’, isaga ayaa inagu xaysiiyey maalinta jacaylka oo dibusoo cusboonaysiyey ‘Lupercalia’; qaawanaanti shaaraca laysku arkayey ayuu dhar usoo xidhay oo yidhi fiidka casho taga. Dunida oo dhan waxaa laga iibiyey in maalinta 14 feebrayo tahay maalinta jacaylka oo wixii israbaa ‘lab iyo dhadig” kala gudoomo kaadh wadnejacayl kusawiranyahay iyo faraawil.
Isku celcelis $17.6 ayaa lagu qiyaasa in maalinta qoskasta jeedkisa ka baxdo dunida si’loo xuso maalinta jacaylka. Ganasi weyn iyo bilyaans ayaa lakala faa’idaa maalinta jacaylka, waxaa hubaal ah in maalintaasu barakaysantahay marka laga eego dhinac gacansiga iyo kala macaashka lakinse barakokale meesha ool. Waxaa ka dhow in jacayl lamatalo maalinta Luubarkoska in dhalinyaradu ku badashaan maalinta Hodan & Cilmi “Boodhari” is caashaqeen.
jacayl maalinta jacaylka maalinta lamaanaha